Vaovao farany COVID - Banky Sakafo any Galveston County
Galveston County Food Bank sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay dia serivisy tena ilaina, ary zava-dehibe ny hijanonanay miasa hatrany amin'ny fampiasana ny fitandremana azo antoka azo antoka. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia tsapanay fa ny fisondrotana dia mety 'rehefa' fa tsy 'raha', ary satria tranom-panjakana izahay dia hanavao eto raha vantany vao fantatray fa nisy tranga marim-pototra olona izay tao amin'ny Banky Sakafo. Tianay ny hangarahara araka izay azo atao, na dia tsy manampy tahotra aza.
Hijanona hatrany izahay, ary mampiasa ny fitandremana azo antoka azo antoka indrindra.
Manohy mailo hatrany izahay amin'ny fampiharana ny fiarovana, manaraka tsara ireo fomba fiarovana CDC momba ny fiarovana sy ny fanadiovana.
Fepetra fiarovana ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo, mpitsidika ary mpiasa:
Manaraka izahay Ny CDC dia nanoro ny fomba fanaovana sterilization ary nampitombo ny faharetan'ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina, indrindra ny manodidina ny faritra be olona (faritra an-tsitrapo, ascenseur, efitrano fivoriana, fandroana, faritra sakafo).
Ny rehetra dia tsy maintsy manao saron-tarehy rehefa hiditra ao amin'ny lobby GCFB.
Ny mari-pana dia alaina amin'ny vavahady fidirana rehetra: mpiasa, mpilatsaka an-tsitrapo ary izay vahiny rehetra.
Ny mpiasa sy ny mpilatsaka an-tsitrapo dia asaina mitazona ny halaviran'ny fiaraha-monina ary raha tsy afaka izy ireo dia tsy maintsy manao saron-tarehy. .
Ny mpilatsaka an-tsitrapo miasa tetik'asa fanatobiana entana dia takiana amin'ny fanasana tanana alohan'ny hanombohan'ny fifindrany, mandritra ny fiatoana, rehefa miova tetik'asa izy ireo ary aorian'ny fivadihan'izy ireo. Misy fonon-tanana koa azo ampiasaina amin'ny tetik'asa fanatobiana entana. Maka mari-pana ihany koa isika amin'ny fahatongavantsika ..
Ny mpiasa dia mampiasa fomba 'manasa, manasa'. Fampitomboana matetika ny fanasana tanana. Fanadiovana matetika kokoa ny toeram-piasan'izy ireo. Raisina ny mari-pana rehefa tonga ..
Ny mpitsidika sy ny mpiasa rehetra dia mampiseho fomba fanao manalavitra ny fiaraha-monina. Eks. Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia asaina miasa 6 metatra isaky ny azo atao ary farafaharatsiny halaviran'ny sandry ..
Mamporisika izay mahatsiaro ho tsy salama hijanona ao an-trano.
Fanadiovana sy famonoana otrikaretina:
Rehefa / raha misy tranga voamarina dia hodiovina tanteraka ny toerana nisy ilay olona ary manaraka ny fenitra nomen'ny CDC izahay amin'ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina. Ireo olona nifanena akaiky tamin'ilay olona dia hampandrenesina.
Tsy fantatra ny sakafo hanelezana coronavirus. Araka ny vao haingana fanambarana navoakan'ny Sampan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina amerikana, "Tsy fantatray ny tatitra amin'izao fotoana izao momba ny aretin'olombelona izay milaza fa ny COVID-19 dia azo ampitaina amin'ny alàlan'ny sakafo na fonosana sakafo.”Toy ny viriosy hafa, azo atao ny miaina ao anaty habakabaka na zavatra ny viriosy miteraka COVID-19. Noho izany antony izany dia zava-dehibe ny fanarahana ny dingana efatra amin'ny fiarovana ara-tsakafo - madio, misaraka, mahandro ary mangatsiaka.